Kumi ngomumo ngowesicathamiya sezikole | News24
Kumi ngomumo ngowesicathamiya sezikole
ISITHOMBE:sithunyelwe UMnu Chris Ntuli nabafundi base Sobantu High School abake baba ompetha bomncintiswano wesicathamiya eminyakeni edlule. Ngemuva uMnu Mzi Mngadi ofundisa kusona lesi sikole.
ABAFUNDI abathanda umculo wesicathamiya ezikoleni zamabanga aphezulu sebengaqala ukubhalisela ukuba yingxenye yendumezulu yomncintiswano wesicathamiya sezikole ozoba se-Playhouse Opera Theatre ngomhlaka 8 kuNhlaba (May).
Umhleli walo mncintiswano uMnu Chris Ntuli uthe yize lo mncintiswano ungenyanga ezayo, ukubhalisela ukuba yingxenye kuzogcina ngomhlaka 30 Mbasa (April).
Ekhuluma nephephandaba i-Echo uthe: “Lena yindumezulu yomncintiswano wesicathamiya osube khona iminyaka eyi-14. Kusuke kuqhudelana abafundi bezikole ezihlukahlukene zaKwaZulu-Natal abaqhamuka ezikoleni zasemalokishini nasezindaweni zasemakhaya.
“Abafundi basuke bekhombisa ngekhono labo ekuqambeni izingoma ezintsha nasekuculeni lolu hlobo lo mculo.
“Simema nezinkakha zabaculi kule ndima okubalwa kuzona iLadysmith Black Mambazo nabanye ukuze zizibonele ikhono eliphethwe intsha yethu.”
Uqhube ngokuthi sekuphele iminyaka engama-23, iqembu alisungula i-Durban Black Drifters ifundisa isicathamiya ezikoleni ezihlukene zakulesi fundazwe, ngethemba lokuthi bazoba khona abafundi abazoqhubeka nalolu hlobo lo mculo noma sebeqedile esikoleni.
“Ngalo mncintiswano sihlose ukugqugquzela intsha yethu ukuba izibandakanye nalo mculo. Asifuni ukuthi umculo wethu ufe, njengoba kuchume umculo waseNtshonalanga entsheni yakithi. Yize umculo wesicathamiya ukhona kuleli zwe, awunikwa indawo eyanele ukuwuqhakambisa njengoba nakumabonakude udlala ngezikhathi ezithize.
“Siyafisa ukuwuqhakambisa kakhulu kusukela emazingeni aphansi, njengoba intsha yethu kuyiyona esibheke ukuba iqhubeke nawo kusasa. Sikhuthaza intsha esezikoleni ngethemba lokuthi iyona ezoqhubeka nomculo wethu ngisho sesingasekho. Yonke into isimi ngomumo mayelana nalo mncintiswano,” kusho yena.
Lo mncintiswano ubuxhaswa iCaltex, kulo nyaka uxhaswe uMnyango wezeMfundo ne-Playhouse Company. Kuyoqala ngo-10am, ukungena kumahhala. Izikole ezifisa ukuba yingxenye, zingathumela ama-sms abhalwe ukuthi “Yes” negama lesikole kunombolo ewu 073 301 6740. Abafundi abangawugqokile umfaniswano wesikole abazuvunyelwa ngaphakathi